St. Kitts & Nevis: Official COVID-19 Tourism Update | Saint Kitts and Nevis travel news
Ikhaya » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zokuhamba zeSaint Kitts neNevis » Kitts & Nevis: Uhlaziyo lwaseburhulumenteni lwe-COVID-19 yoKhenketho
Kitts & Nevis: Uhlaziyo lwaseburhulumenteni lwe-COVID-19 yoKhenketho
Namhlanje, Inkulumbuso yaseSt. Kitts kunye neNevis uGqirha Hon. UTimothy Harris ubhengeze ukuba, phantsi kwe-SR & O entsha 25 ye-2020, uRhulumente uzokwazisa imigaqo emitsha. Ukusebenza ngoMgqibelo, nge-13 kaJuni ngo-2020 ukuya ngoMgqibelo, nge-27 kaJuni ka-2020, le migaqo mitsha iyinxalenye yenkqubo yokuyekelela ngokuthe ngcembe ukuthintela kunye nokubuyisela i-Federation kwimisebenzi yezoqoqosho nentlalo. Inkulumbuso ibhengeze-
NgeMigqibelo ukuya ngeeCawa, ixesha lokufika ebusuku liya kusebenza ukususela ngo-12: 00 kusasa ukuya ku-5: 00 kusasa. Amaxesha amade okufika ebusuku aya kuqhuba iinkonzo zonqulo zasebusuku kunye neenkqubo ezifanayo esele zimiselwe iinkonzo zasemini.
Iilwandle ngoku ziya kuvulwa ukusuka nge-5: 00 kusasa ukuya kwi-6: 00 ngokuhlwa yonke imihla ukulungiselela umthambo
Ukurhoxiswa kwamaphepha-mvume otywala kuthengisiwe kwaye imivalo inokuvulwa ngokuhambelana nemilinganiselo yokuhamba emzimbeni
Iindawo zokutyela zinokuvula ukuba kungenwe ngaphakathi kwindawo yokutyela ngokuhambelana nemilinganiselo yokuhamba emzimbeni, ubuninzi kulwabiwo lwetafile kunye neenkqubo ezifanelekileyo zococeko.
Abaxhasi beevenkile kufuneka banxibe iimaski xa befika ngaphandle kwaxa besitya naxa kuselwa.
Imida yaseSt. Kitts & Nevis ihlala ivaliwe kuthengiso lomoya ngomoya naselwandle ukukhusela kunye / okanye ukulibazisa ukubakho kokungenisa amatyala amatsha e Covid-19 kwi-Federation. Umzamo olungelelanisiweyo uyenziwa namahlakani engingqi nakwamanye amazwe ukumisela ixesha elifanelekileyo lokuvula imida.
Ukuqhubeka kokuyekiswa kwezithintelo kuyaqaliswa kwizindululo zeGosa eliPhezulu lezeMpilo, uMlawuli oyiNtloko weZonyango kunye neengcali zonyango. Ngengcebiso yabo, i-Federation iphumelele ukuyiphelisa ijika.
Ngomhla we-18 kaMeyi, kwabhengezwa ukuba onke ama-15 aqinisekisile amatyala e-COVID-19 kwi-Federation afunyenwe ngempumelelo kwaye kukho abantu abaswelekileyo ukuza kuthi ga ngoku. Ukusukela ngoLwesithathu, nge-0 kaJuni, abantu abangama-10 bebesele besampuliwe kwaye bavavanyelwa i-COVID-417, abali-19 kubo bavavanywe benesifo kunye nabantu abangama-15 kuvavanyo olungelulo kunye neziphumo zovavanyo eziyi-402 ezilindileyo. Abantu abali-0 okwangoku babekelwe bucala kwiziko likarhulumente ngelixa abantu abayi-13 behlukaniswe bodwa emakhaya kunye nabantu aba-0 bodwa. Bebonke abantu abangama-0 abakhululwe bodwa.
I-St. Kitts & Nevis inelinye lawona manqanaba aphezulu ovavanyo kwi-CARICOM nakwi-Mpuma yeCaribbean kwaye isebenzisa kuphela uvavanyo lwePolymerase Chain Reaction (PCR) olungumgangatho wokuvavanywa kwegolide. I-Federation yayililizwe lokugqibela eMelika ukuqinisekisa ityala lentsholongwane kwaye phakathi kwabokuqala ukuxela onke amatyala afunyenwe engafanga.
nqakraza Apha ukufunda Amandla aNgxamisekileyo (i-COVID-19) Imigaqo njengenxalenye yempendulo kaRhulumente yokuqulatha kunye nokulawula ukusasazeka kwentsholongwane ye-COVID-19. URhulumente uyaqhubeka nokusebenza phantsi kwengcebiso yeengcali zakhe kwezonyango, abacebise ukuba iSt. Kitts & Nevis ihlangabezane neenqobo ezi-6 ezimiselwe nguMbutho wezeMpilo weHlabathi (WHO) ngokwenza njalo nokuba bonke abantu abafuna ukuvavanywa baye bavavanywa. ngeli xesha.
Ngeli xesha sinethemba lokuba wonke umntu, kunye neentsapho zabo zihlala zikhuselekile kwaye zisempilweni.